The iPriest: Maazi Robert Mugabe azaala oku Chi kpọrọ ya -Alisonomi
Maazi Robert Mugabe azaala oku Chi kpọrọ ya -Alisonomi
Ọnwu egbuola Maazi Robert Gabriel Mugabe (1924-1919) n'ụlọ ọgwụ di na Singapọ. Maazi Mugabe bu nwa amadi ruru ọrụ nkụzi tupu ọ banye na ndọrọ ndọrọ ọchichi obodo. Na mbu, Maazi Mugabe rụrụ ọrụ di ka minista nke mbu nke obodo ya tupu ọ chiri egbe na ụta chupu onye isi na-achi mba Zimbabwe.
Na mbido, mmadu nile huru Maazi Mugabe di ka nna ndi Zimbabwe. N'ezie, mgbe Maazi Mugabe busoro ndi ọchichi obodo ahu agha, o mere ya dika onye na-achọ nnwere onwe nke mba Zimbabwe. Maka nke a, Maazi Mugabe bidoro ọrụ onye isi obodo ahu di ka nna mba Zimbabwe.
O nyekwara obodo ndi ọzọ nọ na ndida anyanwu mpaghari Afrika aka i chọta inwere onwe ha. Mana di ka ndi kwuru okwu siri kwu, ike ọchichiri na-emebi mkpuru obi mana iji ike aka chiọ ọchichiri na-ala onye na-achi n'iyi kpam kpam. Etu ahụ ka Mazzi Mugabe bu onye lụrụ ọgụ maka i nwere onwe nke ndi obodo ya danyere n'ọnya ọ mara.
Nke a malitere mgbe o bidoro iji ike aka chiba ọchichi. O mere ka Zimbabwe ghọrọ obodo e ji ama atu n'ihi ihe isi ike dakwasiri mba ahu. Ihe biara sie ike na Zimbabwe nke na ego ha juru igbe enweghizi ike izuta utaba. Ihe eji echeta ya taa bu na o jiri aka ike chiọ Zimbabwe n'imirikiti n'ime afo iri anọ ọ chiri obodo ahu.
Mgbe ọ na-achi, o mere ka ọ bu onye a ga-anwu anwu mana mgbe ọ zara oku chi kpọrọ ya n'ụbọsi taa bu ubọsi is n'onwa iteghite nke afọ puku abuo na iri iteghite, o gosiri na onweghi onye kariri ọnwụ nakwa na akụ fecha ọ ga-emecha daara awọ.
Posted by The iPriest at 4:37:00 pm